अञ्जु पन्त धर्म प्रचार गर्न बारा पुगेकी हुन् ? यस्तो छ भित्रि कुरा, पढ्नुहोस – जलजला अनलाइन
अञ्जु पन्त धर्म प्रचार गर्न बारा पुगेकी हुन् ? यस्तो छ भित्रि कुरा, पढ्नुहोस
Posted on April 3, 2019 Author Comments Off on अञ्जु पन्त धर्म प्रचार गर्न बारा पुगेकी हुन् ? यस्तो छ भित्रि कुरा, पढ्नुहोस
चैत २०, काठमाडौं । मंगलबार एकाएक गायिका अञ्जु पन्त आँधी प्रभावित बारामा राहतको नाममा धर्म प्रचारमा गएको खबर सामाजिक सञ्जालमा फैलियो ।
गाडीको डिकीमा केही राहत सामाग्री र किताबहरु राखेर उभिएकी अञ्जुको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको छ । पीडामा पनि धर्म प्रचार गरेको भन्दै धेरैले गायिका अञ्जुलाई गालीगलौज गरिररहेका छन् ।
अञ्जु पन्त धर्म प्रचार गर्न बारा पुगेकी हुन् त ? अनलाइनखबरले गरेकाे ‘फ्याक्ट चेक’ मा रहस्य अर्कै पाइयो ।
अहिले अञ्जु पन्त बारा गएकी छैनन् । बुधबार बिहान ११ बजे उनी रेडियो नेपालमा भेटिइन् । रेडियो नेपालको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजित राष्ट्रव्यापी आधुनिक संगीत प्रतियोगिताको जज (निर्णायक) भएकाले व्यस्त रहेको उनले बताइन् ।
‘मेरो लगातार गीत रेकर्डिङ पनि चलिरहेको छ । म यो पटक बारा जान पाएको छैन, तर हामीले सहयोग पठाएका छौं,’ उनले टेलिफोन कुराकानीमा भनिन् ।
रेडियो नेपालले पनि मंगलबार विहान अञ्जु कार्यालयमा व्यस्त रहेको पुष्टि गरेको छ ।
उसो भए यो तस्वीर अहिलेको हो त ?
अञ्जुले आफ्नै नाममा अञ्जु पन्त फाउण्डसेन खोलेकी छन् । त्यसमार्फत विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएकी छिन् ।
उनका अनुसार केही पहिले उनी सहयोग लिएर बारा पर्सा लगायतका तराईका जिल्ला गएकी थिइन् । त्यहीबेला खिचेको तस्वीर अहिले भाइरल बनाइएको हो ।
अहिले प्रचार गरिएको तस्वीर उनको फेसबुक पेजमा पनि ५ डिसेम्बर २०१८ मै पोष्ट भएको भेटियो । अञ्जु भन्छिन्, ‘हामीले त्यसबेला बालबालिकालाई ब्याग र किताव कापी लगेका थियौं । त्यसलाई अहिले गलत प्रयासमा प्रयोग गरिएछ ।’
आफूले गीत संगीतबाट कमाएको रकमको केही अंश समाजसेवामा लगाउन चाहेको, तर पटकपटक गलत प्रचार गरेर निराश बनाउन खोजेको उनको गुनासो छ ।
घटनाबारे जानकारी दिनेलाई डीएसपीले ‘वाकिटाकी’ प्रहार गरे, एक महिला घाइते
असार ३१, काठमाडौँ । इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी टंक भट्टराईको कुटपिटबाट झापा मेचीनगर-६ की एक महिला घाइते भएकी छन् । डीएसपीले ‘वाकिटाकी’ प्रहार गर्दा स्थानीय लक्ष्मी आचार्य मिश्रको टाउकोमा चोट लागेको हो । ‘घरमा आएर लछारपछार गर्दै टाउकोमा हिर्काए’, लक्ष्मीले कान्तिपुरसँग भनिन्,‘बिना कारण प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते हुन परेँ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ […]
दाङमा फेरि किन चर्कियो आन्दोलन, यस्तो छ कारण
Posted on September 30, 2018 September 30, 2018 Author
असोज १४, दाङ । दाङको नारायणपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका विरुद्ध त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरु आन्दोलित वनेका छन् । तुलसीपरमा भएको टरीगाउँ एयरपोर्टलाई विस्तार गरी नियमित हवाईउडान सुरु गर्नुको साटो स्थानीयको उठिबास लाग्ने गरी निर्माण गर्ने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल कुनै पनि हालतमा हुन नदिने स्थानीय धर्म सिजवालले बताए । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १०, […]
दाङमा भारतीय कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा दुईजना गम्भीर घाइते
Posted on August 18, 2018 Author
भदौ २, दाङ । भारतिय नम्वर प्लेटको कारले ठक्कर दिँदा दाङमा २ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको लमही–भालुवाङ्ग सडक खण्डमा भारतीय कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा दुई जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौंबाट भारतको अलमोरा जाँदै गरेको यूके १४१५ नम्वरको कारले लमहीबाट भालुवाङ जाँदै गरेको रा १ प ५८८३ नम्वरको […]
फिरोज हत्याकाण्ड: भिनाजुको प्रेममा परेकी श्रीमतीबारे बाहिरियो यस्तो अचम्मको रहस्य
रेखा थापा विप्लव माओवादीमा !